FastPay Casino - Saiti saiti, kunyoresa 2021
FastPay Pamhepo Casino
Ruzivo rwekutanga nezve Fastpay portal
Mabhonasi uye zvinokurudzira
Iyo Fastpay Casino chaiyo portal yakavambwa munguva pfupi yapfuura - muzhizha re2018. Munguva pfupi yakadaro, saiti iyi yakabudirira kuwana mukurumbira uye vateereri vakajairika vatengi, izvo zvinoramba zvichikura Vanoronga vakatarisa mukupa mitambo inoenzanirana uye yakajeka, iyo inokwezva vanobhejera uye ichivatendera kuti vafare chaiko munzvimbo dzepamhepo.
Fastpay Casino inoshanda pasi pezinesi ine kunyoresa nhamba 8048/JAZ2020-013 uye inoshandiswa naDama NV, inoshanda pasi pesimba reCuracao. Kunyangwe iri zera diki, rinosanganisirwa mune runyorwa rweakanakisa online macasino. Ichi chivimbiso chekuchengetedza uye kurongeka, saka kunyange vashandisi vasina ruzivo havatyi kusarudza yayo yepamutemo webhusaiti yenguva inonakidza yekuzorora.
Pfungwa yekasino yakanangana nekupa vatengi madipoziti nekukurumidza uye kuongorora kweakaundi. Vashandisi vanovimbiswa kubviswa nekukurumidza kwazvo kwemari dzakakunda uye kusimbiswa kwakanaka. Ichitevera maitiro azvino uno, Fastpay kasino ine nharembozha, pamwe nekuratidzira magirazi, ayo anowedzera zvakanyanya mikana yekubhejera. Pakati pevadyidzani vekirabhu, iwe unogona kuona vakakurumbira venyika vange vachishanda muindasitiri yekubhejera kweanopfuura makore makumi maviri.
Saiti vashanyi vanocherekedza inonakidza nzvimbo yepamutemo webhusaiti uye iri nyore nzvimbo yayo huru inoshanda mabhuroko. Mireza yakajeka inopindirana , ichiratidza vaenzi uye nhengo dzakanyoreswa dzeiyo FastPay Casino kirabhu ruzivo rwese rwunodiwa, pamwe nekumutsa kufarira mune zviri kuitika mumadziro aro chaiwo.
Peji huru ine kunyoreswa, kupinda mukati uye menyu mabhu. Inonzwisisika yakarongedzwa interface inoita kuti zvive nyore kufamba kunyangwe kune vanotanga. Vabhejeri vanobva kunyika dzakasiyana vachanzwa vakasununguka pamapeji ayo, nekuti inoenderana nenhamba huru yemitauro yakasiyana:
Sipanish, chiSwedish, chiNorway, chiFinnish, chiMalay, Kazakh, chiTurkey, chiFrench, chiCzech, chiJapanese nevamwe vazhinji hazvina kukodzera.
Maitiro eiyo Fastray yepamutemo webhusaiti anosiyaniswa nemavara akajeka, saka inofara. Kusava neruzivo rusina basa uye dhizaini yakanaka inokutendera kuti ukurumidze kupukunyuka kubva kumatambudziko ezuva nezuva, uchinyura mumusoro mune huru huru yemitambo yekubhejera.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti kunyoreswa pane yepamutemo webhusaiti yeFastpay Casino inongodiwa chete kune avo vakasarudza kuve nhengo yepamutemo yekirabhu uye kutanga kutamba mari chaiyo, vashandisi vanoipfuura nemufaro. Kunyoresa kwevashandisi :
inoratidza zvinangwa zvakakomba zvemubhejeri;
inobvumira vatengi vesaiti kunakirwa neropafadzo dzakawanda, senge mabhonasi, emahara spins, kukwidziridzwa, kudzoreredzwa;
inoratidza kuti nhengo nyowani yekirabhu inobvumirana nemitemo yeiyo portal uye yasvika zera rehuwandu.
Kugadzira account yemitambo mukasino, ingoisa saiti saiti uye tinya bhatani rekunyoresa. Zvinotora nguva shoma uye zvinoreva:
kuzadza chimiro chemushandisi ne password uye email kero;
Sarudzo yemari yemari;
kusimbiswa kwekugamuchira promo nenzira yekutumira;
kudzidza mitemo nemitemo yekambani;
kusimbiswa kwekukosha kwebhokisi retsamba.
Iyo yekupedzisira poindi inoitwa nekudzvanya pane yekushandisa link, iri mutsamba kubva kune portal manejimendi. Kuve muridzi weakaundi account muFastPay kasino, mubhejeri anoenda kune "Mbiri data" chikamu uye anozadza munzvimbo dzese dzinodiwa kuitira kuti manejimendi ave neruzivo nezve mutambi.
Kudada kwenzvimbo iyi kusarudzwa kukuru kwevaraidzo. Inonyanya kufarirwa michina yemaslot, asi pano iwe unogona zvakare kuwana:
matafura nevatengesi vapenyu.
Iyo Fastpay kubhejera imba ine anopfuura 2500 slots. Ivo vakaunzwa nevatengesi makumi mana, anozivikanwa kwazvo ndeaya: Evolution, NetEntertainment, Microgaming, Yggdrasil Gaming, Playtech, Endorphina, Play N 'Go, Igrosoft, Nextgen, nezvimwewo. Kukosha kwenzvimbo dzese munzvimbo ino ndiko kwavo kwemhando yepamusoro. uye rupo.
Mutambo wemakamuri emutambo:
slots - chikamu chine chaiwo michina;
nyowani - ese slots achangoburitswa nevanopa uye akaonekwa mune saiti katalog;
rarama - mitambo inopfuura zana nemakumi mashanu ane croupiers chaiwo;
roulette ndeyekuvaraidza kwechinyakare kwechero kasino;
tenga ramangwana - software ine kugona kutenga mabhonasi mabasa;
Midziyo inonyanya kuzivikanwa ndeye Book Of Fastpay, Crazy Halloween, Aztec Pyramids, Dolphins Goridhe, 777 Madhayamondi, Zvibereko & Madhayamondi, Jungle Treasure, Bhuku reMadzinza, nezvimwe. Kune vese vashandisi vasina ruzivo rwakanyanya, pane mukana wekutamba zvemahara kuFasipay kasino . Demo haridi kunyoreswa kana mari pane dhipoziti.
Pakarepo mushure mekuvhurwa, saiti iyi yakapa vatengi vayo bhonasi yekugamuchira yekupedzisa kunyoreswa, asi nhasi mukana wakadai wabviswa pane runyorwa rweropafadzo. Panzvimbo iyoyo, nhengo nyowani dzinogamuchira pasuru yekugamuchirwa. Inoita kuti zvikwanise kuzadza iyo dhipoziti pane anonyanya kunaka mazwi.
Pakutanga kumusoro-kumusoro, saizi yechipo kubva kukasino ichave 100% uye ichawedzerwa ne100 yemahara FS. Munguva yechipiri dhipoziti, mutengi anowana bhonasi ye75% yemari yakachengetwa kuaccount. Iwo mashoma emari emari ekugadzira dhipoziti pane yekutanga dhipoziti ndeye 1000 RUB, 20 EUR, 20 USD, 8800 DOGE, 0.05 ETH, 0.002 BTC, 0.4 LTC, 0.096 BCH. Nguva yekuvabheja mazuva maviri. Mune ino kesi, wager ndeye x50.
Kune vatengi venguva dzose, akakosha mamiriro anoshanda. Iyo VIP chirongwa ine gumi nhanho uye inosanganisira yakawanda nhamba dzakasiyana siyana dzinonakidza zvipo, hukuru zvipo uye kudzoserwa mari.
Kuti zvive nyore, unogona kuzadza dhipoziti uye kubvisa purofiti mune inotevera mari: RUB, USD, EUR, NZD, CAD, AUD, PLN, NOK, JPY, ZAR, BTC, BCH, LTC, DOGE, ETH. Fastpay kasino inogamuchira cryptocurrency, iyo inowedzera zvakanyanya kukwezva kwayo mumaziso evashanyi, nekuti haibhadhariswe mutero.
Zvemari zviitiko zve Fastpay kasino inoitwa neanenge ese anodikanwa masisitimu ekubhadhara. Nzira dzakakurumbira dzekuisa mari ndeidzi: Visa, Mastercard, Maestro, Webmoney, Ecopayz, Neteller, Mifinity, Skrill, Muchbetter, Rapid transfer, EcoVoucher, Neosurf, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Tether.
Marisiti anoitwa ipapo ipapo uye haadi komisheni, kunze kweWebmoney. Kuwanda kwekuzadzikiswa kwedhipositi kwakasiyana muhuremu kubva pa10 kusvika ku4000 EUR/USD. Mu cryptocurrency, iyo yepasi mubhadharo ichave 0.0001 BTC, 0.01 ETH, 0.01 LTC, 1 DOGE, 0.001 BCH.
Unogona kubvisa purofiti uchishandisa Webmoney, Ecopayz, Neteller, Skrill, Muchbetter, Rapid transfer, Mifinity, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Tether. Maitiro acho anoitwa pasina kutumwa uye anotora anosvika maawa maviri. Kuti uone kuti ndiani, mushandisi anofanira kuenda nenzira yekuongorora.